Fanohanan’ny CPA: tanora 24 niofana maimaimpoana momba ny « comptabilité » | NewsMada
Fanohanan’ny CPA: tanora 24 niofana maimaimpoana momba ny « comptabilité »
24 ireo mpianatra avy amin’ny ivontoeram-pampianarana ambony nahatody hatramin’ny farany ny fampianarana nomen’ny Association contribution et promotion vers l’avenir (CPA) momba ny fitantanambola, ny « fiscalité », ny fitantanana. « Tanjon’ny fanofanana ny fampiroboroboana ny tolotra mifandraika amin’ny comptabilité sy ny fitantanana, hanampiana ny tanora hiditra amin’ny sehatry ny asa », hoy ny filohan’ny fikambanana CPA sady mpahay taokaonty ihany koa, Ramiaramanana Rija Francis.
Nandefa tolotra handraisana tanora efa manana mari-pahaizana amin’ny lalam-piofanana toekarena izy ireo teny amin’ny sekoly ambony misy ireo sampam-pampianarana ireo. Nangatahina ny taratasy milazalaza momba ilay tanora ary niroso tamin’ny fihaonana mivantana amin’ny tomponandraikitra ireo vosafidy.
Maimaimpoana ny fampianarana nandritra ny enim-bolana nifarimbonan’ny manam-pahaizana nitondra ny traikefany. Aorian’ny fiofanana, afaka miara-miasa amin’ny mpahay taokaonty mikirakira raharaha ireo tanora, eto an-toerana na any ivelan’ny Nosy. Mahasarika ny tanora izao ny lalam-piofanana « comptabilité ». « Manokatra varavarana betsaka ny comptabilité sady misy ny fikambanana CPA koa manampy hiditra amin’ny asa », hoy ireo mpiofana.